आफ्नो सिइओ आफैं बनौं | विचार | साझामन्च
रामचन्द्र उप्रेती, प्रकाशित मिति : २०७५ ,बैशाख , १० 10:26:23
कुनै कम्पनीको व्यवसाय ओरालो लाग्यो भने सबैभन्दा पहिला त्यसको कार्यकारी प्रमुख (चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर, सिइओ) असफल भएको मानिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी फस्टाउँदै गयो भने त्यसको जस पनि कार्यकारी प्रमुख अर्थात् सिइओले नै पाउँछ । यसलाई सरल र सबैले सहजै बुझ्ने अथवा हाम्रो सापेक्षतामा चलन चल्तीको भाषामा ‘मेनेजर’ वा व्यवस्थापक जे भने पनि हुन्छ ।
कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति विशेष गरी कम्पनीहरुमा शसर्त हुने गर्छ । जस्तै कम्पनीको अवस्था नियुक्त हुँदाको अवस्थामा यो छ र नियुक्त भएको यति अवधि भित्रमा यो अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ । सिइओले पनि यो जिम्मा लिएको हुन्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले सिइओको नियुक्ति गर्छ, सेवा सुविधा तोक्छ । त्यसपछि कम्पनीको साधन स्रोतको उपयोग गरेर कार्यकारी प्रमुखले सञ्चालक समितिले दिएको र आफैंले स्वीकार गरेको लक्षलाई पछ्याउने गर्छ ।
कामको प्रगति नियमितरुपमा अध्यक्ष वा तोकिएको सञ्चालकलाई बुझाउने र सञ्चालक समितिको बैठकमा लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । कुनै अनपेक्षित संकट आइपरे मात्रै सञ्चालक समितिले हस्तक्षेप गर्छन् । सामान्य अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखलाई आइपर्ने नीतिगत असजिलो अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिले फुकाउने काम गर्छन् । यदि निर्दिष्ट लक्ष हासिल गर्दै गए कम्पनी सफल र लक्ष हासिल नभए कम्पनी असफल हुन्छ । तर कम्पनी असफल हुनुभन्दा पहिला नै कम्पनी जोगाउने काम कार्यकारी प्रमुखकोभन्दा सञ्चालक समितिको हुने गर्छ ।
प्रस्तुत आलेखमा पङ्तिकारले कुनै कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको कुरा गर्न लागेको होइन तर कम्पनीको उन्नति र अधोगतिमा सिइओको भूमिका हुन्छ मात्र भनेको हो । यहाँ यस्तो एउटा कम्पनीको चर्चा गरिँदैछ, जहाँ कुनै पनि कम्पनीका विशेषताहरु भरिपूर्ण हुन्छन् । अलिकति कम्पनीका विशेषताहरुको पनि चर्चा गरौं ।
कम्पनीको कानूनी हैसियत हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, काम हुन्छ, उद्देश्य पूरा गर्न कार्ययोजना अर्थात् प्लान हुन्छ, स्रोत र साधन हुन्छन्, सम्भावना हुन्छ, चुनौति हुन्छन्, योग्यता हुन्छ, वित्तीय पूँजी, सामाजिक पूँजी हुन्छ, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता पनि सँगसँगै हुन्छन्, साख हुन्छ । आदि आदि ।
व्यक्ति, परिवार, पेशा र साना व्यवसायमा पनि यी सबै विशेषता भएका हुन्छन् । जस्तै व्यक्तिको कानूनी हैसियत हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, योग्यता हुन्छ अर्थात् एउटा विशाल कम्पनीमा जे जे विशेषता हुन्छन् ती विशेषता एउटा व्यक्ति, पेशा र साना–साना व्यवसायमा पनि हुन्छन् । व्यक्ति, व्यक्तिले गर्ने पेशा र व्यवसायमा पनि सिइओको भूमिका राम्रो भयो भने पेशा र व्यवसायमा प्रगति हुँदै जान्छ । सिइओको भूमिका कमजोर भयो भने अरुलाई दोष दिन त सकिएला तर प्रगति हात लाग्दैन ।
त्यसैगरी एउटा व्यक्तिको जीवनमा पनि असल र योग्य सिइओको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सारमा भन्दा सिइओको भूमिका जस्तो छ जीवन, पेशा, व्यवसाय त्यस्तै हुन्छन् । यदि सिइओ कमजोर, अल्छी, खासै क्षमता नभएको, भएको साधन स्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने, गर्न नजान्ने, सिक्न धेरै ध्यान नदिने, अरुको कुरा खासै नसुन्ने, आफ्नो कुरामा अलि बढ्तै घमण्ड गर्ने, जिद्दि गर्ने, परिस्थितिको सही आँकलन गर्न नसक्ने, लोभी, भोगी, अस्वस्थ सिइओको अगुवाई अथवा निर्देशनमा चल्ने जीवन वा यस्तो स्वभाव, आनिबानी भएको सिइओ भएको पेशा, व्यवसाय कस्तो होला ? पक्कै पनि तपाईंले चाहेको जस्तो राम्रो हुँदैन होला ।
के तपाईं यो आलेखमा प्रस्तुत गरिएको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ ? सिइओ राम्रो भयो भने कम्पनी, जीवन, पेशा, व्यवसाय राम्रो हुँदैजान्छ र भएन भने कमजोर, संकटग्रस्त, लथालिङ्ग हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको जानकार हुनुहुन्छ ? त्यसो भए के तपाईं राम्रो, योग्य, क्षमतावान, विचारवान, असल, अनुशासित, स्वस्थ, जाँगरिलो, फुर्तिलो, निरन्तर काममा मनोरञ्जन गर्न सक्ने, कुशल सिइओको खोजीमा हुनुहुन्छ ? सायद हुनुहुन्छ होला । लौ आउनुहोस् यस्तो सिइओको खोजी गरौं ।
यो सिइओको मुख्य काम तपाईं वा मैले गरेको पेशा, व्यवसायलाई निरन्तर सफल बनाउनु हुनेछ । अर्को अर्थमा भन्दा हामीले भोगिरहेको जीवनलाई सफल बनाउन सक्ने हुनुपर्छ । अब विचार गरौं त हामी आपैmंले भोगेको जीवनलाई सफल बनाउन अथवा हामीले गरिरहेको पेशा व्यवसाय सफल बनाउन सबैभन्दा योग्य सिइओ को हुन सक्छ ? र, सिइओ कस्तो सोच अथवा चरित्र भएको होस् भन्ने चाहन्छौं ?
एकछिन गम्भिर भएर सोचौं त हाम्रो जीवन, हाम्रो पेशा, हाम्रो व्यवसाय अर्थात् मेरो जीवन, मेरो पेशा, मेरो व्यवसाय, मेरो कामको सबभन्दा उपयुक्त सिइओ म आपैmं बाहेक अरु को हुन सक्छ ? मलाई मैले जति अरु कसले चिनेको हुन्छ ? मेरो सफलता वा असफलतामा मेरोभन्दा बढ्ता कसको भूमिका हुन सक्छ ? मैले वर्षौंदेखि जानेको, गरेको कामको मभन्दा बढ्ता अरु को जानकार हुनसक्छ ? मेरो परिवेश, मेरो स्रोत साधन, मेरो क्षमता, मेरो कमजोरी, मैलेभन्दा बढ्ता कसले जानेको हुन्छ ? मेरा कमजोरीहरु कम गर्दै जान र राम्रा पक्षहरु बढाउँदै जान मभन्दा योग्य अरु कुन पात्र हुनसक्छ ? त्यसैले आफ्नो सिइओ आफैं बनौं ।
मैले एउटा धार्मिक कार्यक्रमको प्रवचनमा सुनेको थिएँ । मन चञ्चल हुन्छ तर आत्मा त्यस्तो चञ्चल हुँदैन । मनले ठीक बेठीक जे पनि भोग्न चाहन्छ तर आत्माले ठीक र बेठीक छुट्याउँछ । मनले ढाँट्छ तर आत्मालाई ढाँट्न सकिँदैन अर्थात् आत्माले सत्य बोल्छ । मन स्वार्थी हुन्छ तर आत्मामा स्वार्थ हुँदैन । यस्तै–यस्तै । यसको सार भनेको एउटै मानिस भित्र पनि घनघोर द्वन्द्व हुन्छ । ठीक र बेठीकको द्वन्द्व, भोग र सत्को द्वन्द्व, जीवनको सुख र आत्माको सुखको द्वन्द्व, प्रेम र घृणाको द्वन्द्व, घमण्ड र स्वयम्ताको द्वन्द्व, इमान र बेइमानको द्वन्द्व आदि । हुँदाहुँदा जिब्रो र पेटको पनि द्वन्द्व हुन्छ । पेटले शरीरलाई चाहिने कुरा र चाहिने जतिमात्रै खोज्छ तर जिब्रोले मान्दै मान्दैन ।
हो, हामीलाई एउटा सिइओ चाहिएको छ । आफैंभित्र हुने द्वन्द्वको सही समाधान गर्न सक्ने सिइओ । तपाईं हामी आफैंभित्रको द्वन्द्वको समाधान गर्ने उपयुक्त सिइओ आपूmभन्दा अरु को हुन सक्छ ? शरीर स्वस्थ राख्न जिब्रोको कुरा सुन्ने कि पेटको ? आफ्नो जीवनमा के ठीक के बेठीक, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ।
कुन कामले क्षणिक फाइदा मात्रै दिन्छ र कुन कामले दिगो फाइदा दिन्छ, कुन कुराले सम्बन्ध राम्रो हुन्छ र कुन कुराले सम्बन्ध बिग्रन्छ ? जस्ता कुराहरुमा मनको आवाजभन्दा आत्माको आवजलाई सुन्ने र त्यही अनुसार कर्म गर्र्दै जाने होभने सायद आफ्नो लागि, आफ्नो कामको लागि, आफ्नो पेशा–व्यवसाय र आफ्नो दुनियाँको लागि हामी आफैं सबैभन्दा राम्रो (बेस्ट) सिइओ बन्न सक्छौं । त्यसैले आफ्नो सिइओ आफैं बनौं ।
मैले यस्ता कयौं मानिसको कुरा सुनेको छु जोसँग खराब बानी छ । कुलतको शिकार बनेका छन्, राम्रो गर्छु त भन्छन् तर गर्दैनन्, अब यो खान्न त भन्छन् तर छाड्न पनि सक्तैनन् । अरु त अरु अति नै सानासाना लाग्ने काम कुरामा पनि उनीहरु भनेजस्तो वा आफैंले चाहेको जस्तो गरिराखेका हुँदैनन् ।
जस्तै, म बिहान ५ बजे नै ओछ्यानबाट उठ्ने गर्छु । म नियमित व्यायाम गर्छु, खैनी खान्न, धूमपान गर्दिन । म धेरै मादक पदार्थको सेवन गर्दिन, म मीठो लाग्दैमा शरीरलाई अहित हुनेगरी धेरै खान्न । म मेरो शरीर र स्वास्थ्यको सधैं ख्याल गर्छु । म अरुको अहित हुने कुनै काम गर्दिन । म सत्य बोल्छु र बोलेको कुरा पुरा गर्छु । म मेरो काम ठीकसँग गर्छु, म अध्यायन गर्छु, म सिक्छु । आदि आदि ।
यति सामान्य कुरा हामी किन पूरा गर्न सक्दैनौं ? के हामी यिनै र यस्तै कुरालाई ठीकसँग नगरेर नै आफ्नो काम, व्यवसाय र जीवनमा असफल हुँदै गएका त होइनौं । यिनै काम ठीकसँग गरिदिने सिइओको खोजी गरेको हो ? त्यसका लागि तपाई हामी आफैंभन्दा योग्य सिइओ अरु कोही हुन सक्छ र ?